Yogurt: zokupheka. Indlela ukupheka yogurt yogurt Ungadliwa
kunzima ngokwanele ukuze ulondoloze impilo yabo evamile, uma ungenawo athobele imodi efanele nokudla. Yingakho ochwepheshe batusa nsuku zonke ukusebenzisa imikhiqizo yangempela yobisi ukuba bephakamisa ipheshana wokugaya ukudla, ngcono ukungatheleleki ukuqinisa amathambo namazinyo.
Namuhla abantu abaningi baqala ekuseni yabo nge-yogurt okumnandi nokunomsoco. Nokho, umkhiqizo ezifana edayiswa ezitolo, ngaso sonke isikhathi wusizo emzimbeni womuntu. Kule ndaba, kuyinto efiselekayo ukwenza ekhaya usebenzisa imbiza thermos noma idivayisi ekhethekile njenge-yogurt. Ungadliwa of okukhona wathola akunankinga. By the way, ngazo namuhla futhi kuzoxoxwa. Nokho, thina ungacabangi nje kuphela ngokuthi amasha nezindlela ezintsha zokulungiselela yogurt esiphundu, kodwa amanye kophudingi ukuthi zingenziwa ngokusebenzisa kule divayisi.
Yogurt (zokupheka ezinemininingwane kancane ngezansi) kuyinto encane kagesi into yasendlini, aboncamane nofana round ukuma, okuyinto iyakwazi ukusekela isimo sezulu akhethekile lokushisa oyifunayo sokuthuthukiswa acidosis acid amagciwane. Thenga kule divayisi unga nganoma iyiphi esitolo onguchwepheshe ubuchwepheshe at an ngentengo eqolo.
Indlela ukupheka yogurt yogurt (zokupheka)?
Classic ubisi umkhiqizo thuluzi Kulula kakhulu. Nokho, i-ekuwulungiseleleni yokugcina kuyodingeka ichithe ama kusuka amahora 4 kuya ku-10.
Ngakho, sicabanga kabanzi yogurt iresiphi yogurt "Moulinex". Ngenxa yalesi sidinga zingxenye ezilandelayo:
ubisi fresh 3.5% amafutha - 1 L;
nhlama ebilisiwe - umthamo kufanele kusekelwe encwadini imiyalelo.
Kukhethwa kwesokudla izithako
I-yogurt "Moulinex" zokupheka ingase ihlanganise imikhiqizo ehlukene. Nokho, uma ufuna kuphela ukuba silungiselele yogurt, khona-ke lokhu uzodinga ukuthenga izithako ezimbili kuphela ngenhla. Starter umkhiqizo esihlwabusayo futhi unempilo, kuyinto efiselekayo ukuthenga Pharmacy noma ezitolo ukudla impilo. Njengoba for ubisi, kungenzeka ukuthatha isiphuzo noma. Nakuba kunconywa ukuba nithele phambi kuhlangana ngqo acidosis acid amagciwane. Asithathe yezinto zokuqala kuqala.
Seyogathi "Moulinex" (dessert zokupheka uzobe kuchazwe waba amadivayisi enjalo) udinga kuphela acidosis acid amagciwane ande ngokushesha. Njengoba for Ukushisa isiphuzo main, lokhu ke lingasetshenziswa kanye ipuleti evamile. Ngakho, kubalulekile ukuba uthele ubisi fresh ibe isitsha koqweqwe lwawo, gqoka umlilo futhi imenze ngamathumba. Kuleli zinga, isiphuzo kuyinto efukamela othandeakayo imizuzu eyishumi nanhlanu, futhi ke selehlile ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, e-abilisiwe selehlile phansi ubisi ukuze ungeze ukuziqalela futhi uhlanganise kahle ukugwema izigaxa ahlale. Ingxube kwaphumela kumele batheleka isikhunta oyi-inzalo wesula ezomile, bese uwafake le yogurt. Ngemva kwalokho, amandla kumele embozwe ngesivalo, wabeka mode Ukushisa, bese uvula. Kuye ngalokho okunezela owasebenzisayo ufuna kanjani ukuba uthole kwabantu umkhiqizo, yogurt ingalungiswa kusuka amahora 4 kuya ku-10.
ongakhetha Okunye kophudingi
Yini enye kungenziwa kusetshenziswa idivayisi njenge-yogurt? Ungadliwa for imikhiqizo yobisi isibilile ayikwazi ukwenziwa kuphela yokuthi angasebenzisi ubisi nemvubelo. Phela, namuhla kukhona nezinye izithako eziningi kangaka ngawo ungenza simnandi kakhulu futhi dessert ewusizo wonke umndeni. Ake sicabangele ezinye zazo kabanzi.
Phatha abathandi ikhofi
Ungadliwa for yogurt Tefal cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kulezo izindlela ukupheka, okuyinto zidizayinelwe "Moulinex" brand nokunye. Yingakho ngeke ugxile nomkhiqizi futhi bamele ongakhetha jikelele.
Ngakho, sidinga dessert ikhofi:
esihle isihlabathi ushukela - 110 g;
ikhofi osheshayo noma - 4 nezinkezo ezinkulu;
ubisi 4% fat - mayelana 1-1.2 amalitha;
nhlama ebilisiwe - ungeze ulandele iziyalezo ezikuyo.
ubisi Fresh kumelwe alethwe ngamathumba, bese siphela therein iyiphi ikhofi esihle kanye noshukela. I isiphuzo okuholela liyadingeka sokwehlisa intukuthelo ukubeka kuso imvubelo uhlanganise kahle. Ngaphezu kwalokho eyohlobo ikhofi mass ukuba zisakazwe phezu isikhunta, uzinameke lid wafaka kudivayisi. Ngemva 8 amahora ukuchayeka yogurt kufanele ibekwe ku esiqandisini imizuzu 60-120 uphake.
A ukudla kwasekuseni okunomsoco izingane
Yogurt nama-dessert, zokupheka zazo esizoyicabangela kulesi sihloko zingase zihlanganise izingxenye ezahlukene kakhulu ngokwabo. Ake sicabangele lokho okwakuzokwenzeka uma enjalo uswidi ukuze ungeze ama-cookie kanye marshmallow. Ngenxa yalesi sidinga:
esihle isihlabathi ushukela - 70 g;
marshmallow yimuphi umbala, kodwa ngaphandle ocwebezelayo - 5 PC.
shortbread amakhukhi "weJubili" - 4 nama-PC.;
berry yogurt oweba ezitolo - 1 bakhonze.
Ukupheka ukudla kwasekuseni okumnandi
Fat ubisi kufanele batheleka isitsha kwensimbi futhi imenze ngamathumba bese ususa emlilweni futhi kuphole zangaphambi uthele ushukela. Ngemva kwalokho, isiphuzo ufuna ukwengeza ingxenye berry yogurt, esitolo-uthenge, ugovuze kahle. Ngaphezu kwalokho, phezu isikhunta phansi abeke amakhukhi sikhuntile futhi marshmallow oqoshiwe, bese uthele kubo ngaphambilini walungisa imvubelo bese usetha ku idivayisi emahoreni angu-8. Emva kwalesi sikhathi kubuya mkhiqizo edingekayo ukusekela egumbini esiqandisini, bese ukukhonza. Kufanele kuqashelwe ukuthi uju enjalo kuvela esihlwabusayo kakhulu, elimnandi futhi eqotho.
dessert Iwusizo ngezithelo okusemathinini
Indlela yokwenza uswidi esihlwabusayo ngosizo idivayisi njenge-yogurt? Ungadliwa for mikhiqizo ingase ihlanganise izithelo fresh hhayi kuphela, kodwa futhi okusemathinini. Ngemva dessert nabo uzoba mnandi kakhulu futhi zibe nephunga elimnandi.
izithelo Ilondolozwe noma amajikijolo (uphayinaphu, amapentshisi, amapulamuzi, amabhilikosi, njll ...) - 4 PC.
usulubha omnandi wezithelo (owodwa okwakukhona kulo izithelo) - 5 nezinkezo ezinkulu;
ubisi Fresh kufanele ubilise phezu ukushisa eliphezulu ke ususa emlilweni, epholile, engeza oqoshiwe izithelo okusemathinini, usulubha omnandi wezithelo, futhi lemali edingekayo imvubelo. Zonke lezi izithako kudingeka uhlanganise nge mixer ke uthele isikhunta inzalo futhi kuphekwe yogurt kuyinto amahora mayelana 5-8. dessert Ready bamboze futhi igcinwe futhi bayafundisa okungenani amahora amabili e esiqandisini ekamelweni.
Yenza dessert vanilla noju
Kuze kube manje, bakhula inani Amazing of kophudingi ukuthi ingalungiswa ngosizo ekhishini iyunithi njengoba yogurt. Ungadliwa isibilile imikhiqizo yobisi zihlanganisa hhayi kuphela suite ejwayelekile imikhiqizo ehlanganisa ubisi nemvubelo, kodwa nezinye izithako. Bangenza uju okuzenzela tastier okuningi futhi enempilo ukuze kuthengiswa esitolo. Ukuze lo mkhiqizo, kungase kudingeke zingxenye ezilandelayo:
vanilla - engeza ukunambitha;
Uju Lime Fresh - 5 nezinkezo ezinkulu;
brown sugar - kancane (engeza ukunambitha);
ipuleti alimondi - 3 dessert nezinkezo;
Senza dessert ewusizo
Ukuze kulungiswe umkhiqizo anjalo kumele ubilise ubisi fat, bese kuphole, ufaka i-vanilla, fresh lime uju, ushukela onsundu (uma uthanda), plate kusukela alimondi nemvubelo. Ngaphezu kwalokho, zonke izingxenye ezidingekayo ukuze uhlanganise kahle, walala phezu isikhunta ezomile futhi wafaka yogurt. Ngokwesilinganiso, ezifana uswidi ilungiselela cishe amahora 7. Ngemva dessert sikhula, kufanele kube uvalwe amboze futhi esiqandisini. Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi lo mkhiqizo kuvela nje kuphela esiphundu, kodwa futhi owanelisayo futhi okunomsoco.
ushizi okumnandi futhi usentekenteke
Cottage shizi in yogurt - akuyona inganekwane. Ngempela, umkhiqizo ubisi ezifana ngokuvamile kwenziwa esebenzisa idivayisi isethulo. Ngenxa yalesi sidinga:
ubisi fresh yikuphi okuqukethwe amafutha - 1 L;
imvubelo ngokwenza cottage shizi - ibhodlela.
ukulungiselela izinqubo ushizi yogurt ku yogurt zifana kakhulu. Nokho, yini umehluko phakathi kwalokhu sisekhona. Ukuze wenze lokhu, uthele ubisi yikuphi okuqukethwe amafutha esitsheni koqweqwe lwawo bese uwulethe ngamathumba futhi kuphole. Ngaphezu kwalokho, e-isiphuzo selehlile ukwengeza ukuziqalela futhi kahle ukuxuba izithako. Ngemva kwalokho, mass kuyadingeka ukuze uthele esitsheni ngokwenza cottage shizi (uma unayo) bese efakwa idivayisi. Ukwenza umkhiqizo elinjalo kufanele ibe yogurt amahora mayelana 4-6. Emva kwalesi sikhathi, ingxube iyunifomu futhi obukhulu edingekayo ukuze uthele epanini ngokushesha basibeka okugeza amanzi. Kuleli zinga, mass yobisi Kunconywa ukumelana imizuzu okungenani 45. Okuqukethwe ethangini kuyadingeka ukubeka ngo cheesecloth futhi ake kuyayiqeda wonke serum. Ngenxa yalokho, kufanele uthole emnene kakhulu futhi okumnandi cottage shizi, okuyinto kumele zithunyelwe etafuleni kanye ukhilimu omuncu, ushukela noma berry ujamu.
Njengoba ubona, yogurt (zokupheka zazibhekwa kancane ephakeme ngoba) kuyinto ewusizo kakhulu ekhaya Imishini. Ngalo ungakha dessert emangalisayo okwehla esiphundu futhi unempilo ukuthi uyojabula hhayi kuphela abadala kodwa futhi izingane. Kufanele kuphawulwe ukuthi, ngaphezu yogurt zakudala, e thuluzi Kulula kakhulu futhi elula obucayi kakhulu emihle cottage shizi, kefir, yogurt noma katyk. Qinisekani ngalokhu, esisodwa usebenzisa kule divayisi, akasoze aphuma khona ngemuva.
Ungadla Simple for a epikinikini
Yokudla Kancane Kancane anyanisi
Indlela yokukhetha i-laptop enamandla yokusebenza ngehluzo?
Indlela yokukhetha umyeni: iseluleko somqondo wezengqondo. Umyeni ofanelekayo. Indoda encane. Yini okufanele indoda iyenze?
Legend zezwe kanye ifilimu lesiFulentshi Michel Cerro
Ihhotela Sunrise Khetha Arabian Beach Resort Indawo abantu 5: Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza